ကျွန်တော် နှင့် ဖက်ဆစ် ~ မျှဝေမှုတို့ စုစည်းရာ
ဟိုလေ. . ဟိုနေ့က ပို့ထားတဲ့ မိုနိုပိုလီ ပိုက်ဆံလေ . .
အဲဒါ ရောက်လားလို့ ဖက်ဆစ် ပို့ပေးပါ။
ဖက်ဆစ်နဲ့ မရင် ကွန်မြူနစ်နဲ့ ပို့လည်းရတယ်။
ဘာနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ရရင် ပြီးရော . . .
ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ သူတို့တွေလည်း သိပ်နားမလည်တော့လည်း ခပ်ကြောင်ကြောင်မေးမိကြတာဖြစ်မှာပေါ့ ဒီအလုပ်ကို ကူညီပေးနေတဲ့ မင်းလည်း ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝ ဖြစ်တာပေါ့ ။
“ ဟလို...လေပန်းလား တစ်နေ့က ငါ့မိန်းမကိုလွှဲလိုက်တဲ့ ဒေါ်လာ ငါးထောင် မင်းဖြတ်တုတ်ထားတယ်ကြားတယ် မှန်လို့ကတော့မင်းကို ခေါင်းလာဖြတ်မယ် ဒါပဲ ဂလောက် ”
ဒါနဲ့ ငါ့နာမည်က ဘယ်ကပါလာတာတုန်းး နာချင်လို့ အားရင် ဒီကြောင်ကိုပဲလာာလာထိနေတယ် ကုတ်ထည့်လိုက်လို့ကတော့လားကွာ
နင့်မိန်းမက ငါ့ကိုသေချာမှာသွားတယ်.. သေနာမျိုးကို မပို့နဲ့တဲ့ ကိုကိုဟူး သုံးလိုက်တဲ့..နင့်ကိုမချစ်လို့ ငါဆီပစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့.. နင်မိန်းမက ဘောစိဟ။ တိန်
ခင်ဗျားတို့ အရမ်းလိုချင်နေတဲ့ ဖက်ဆစ်တွေ ပို့ လိုက်ပါပြီ..
ရန်ကုန်ကို အကြောင်းကြားပြီး အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေကို တိုက်ထုတ်ပါ....
လွပ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုရင် ချက်ခြင်း ဖက်ဆစ်ပြန်ပို့ ပေးပါ...။
မောင်မိုးယံကို သနားလို့ ပိုက်ဆံကို ကွန်တိန်နာနဲ့ပဲ ပို့ပေးလိုက်တယ်။
ဟား ဟား ကိုမိုးယံရဲ့ အလုပ်ရော ကော်မန့်တွေရော အရမ်းကောင်းတယ် . ပထမဆုံးလည်တာပါ မင်္ဂလာပါရှင်
ဒီကနေ့ ဘွဲ့ရပြီး မနက်ဖြန် စာမဖတ်လျှင် သန်ဘက်ခါ စာမတတ်ဖြစ်သွားမည်။....အခုဒီစာကို သင်ဖတ်နေတယ်ဆိုရင် သူဟာ ကံကောင်းသူ နှစ်ထပ်ကွမ်းပါ။ လူဦးရေသန်း
၂ဝဝဝ ဟာ စာမဖတ်တတ်လို့ပါပဲ။
ဖက်ဆစ်ဆိုလို့ ဖက်ဆစ်အသံကြီး ပြူးပြဲရှာသွားတယ်
အမငီး...ငမိုးတို့ ဒီအသံနဲ့ အဆိုတော်လုပ်စားလိုက်ရင်တော့ စိုင်းစိုင်းတို့
အင်း.. အသံကြည်လင်မှုရှိတယ်..mp3 ပလေယာကို ဒီ့ထက် အပျံစာလေးနဲ့
လှအောင် လုပ်ချင်ရင်တော့ နောက်တစ်ခါ ငါ လုပ်ပေးမယ်